Madaxweynaha Barcelona oo jawaab ka bixiyay bayaan ay Atletico Madrid ka soo saartay Griezmann horraantii bishan – Gool FM
Madaxweynaha Barcelona oo jawaab ka bixiyay bayaan ay Atletico Madrid ka soo saartay Griezmann horraantii bishan
(Spain) 15 Luulyo 2019. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa ka hadlay warkii rasmiga ahaa ee kasoo baxay Atletico Madrid horraantii bishan. Kaasoo ay naadiga reer Catalonia kaga dalbadeen inay bixiso qiimihii hore ee lagu kansali karay heshiiska Antoine Griezmann.
Laakiin ugu dambeyntii Barcelona ayaa ku soo gabagabeysay dhameystirka heshiiska Griezmann lacago dhan 120 milyan euro, maadaama uu hoos u dhacay qiimihii u diiwaan gashanaa in lagu kansalo qandaraaskiisa ee gaarsiisnaa 200 milyan euro 1-dii July.
Si kastaba ha ahaatee, Atletico Madrid ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxda Barcelona iyo laacibka reer France ay si hoose u heshiiyeen, kahor dhamaadka xili ciyaareedkii hore, kahor inta aanu hoos u dhicin qiimaha lagu kansalayay heshiiskiisa xiligaas oo ah 200 milyan euro.
Hadaba Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa kaddib markii ay dhameystireen heshiiska Griezmann wuxuu jawaab ka bixiyay hadalka kasoo yeeray Atletico Madrid wuxuuna yiri:
“Waan la hadlay iyaga, ma jirto wax cadeyn ah, ama wax kale”.
“Aragti ahaan, Atletico Madrid waxay difaaceysaa danaheeda, waxaan la hadlay Enrique Cerezo, waan arki doonaa sida uu horumar u sameeyo, laakiin waxba ma jiraan, waxaan la xiriirnay Griezmann kaddib markii uu sameeyay fiidiyoowga uu ku macsalaameeyay saaxiibadiis kooxda, waxba ma jirin bishii Maarso”.
“Waxaan la fariisanay Atletico Madrid, si aan u ogaano qaabka loo bixin karo lacagaha, ma jirin waxaan awoodnay inaan sameyno, kaliya waxaan bixinay lacagaha lagu burburiyay heshiiskiisa, mana fududa inaad sameyso hawlgalkan oo kale”.
Frank Lampard oo si weyn u amaanay xiddig ka tirsan Chelsea, kaddib markii uu sameeyay arrintan cajiibka ah